မတော်ရသေးတဲ့ယောင်းမလောင်းလေးရီရီပွင့်ဖြူရဲ့ စေတနာမေတ္တာနဲ့ သိတတ်မှုတွေကြောင့် မိသားစုအားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ရပုံကို ပြသလာခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်… – Shwewiki.com
မတော်ရသေးတဲ့ယောင်းမလောင်းလေးရီရီပွင့်ဖြူရဲ့ စေတနာမေတ္တာနဲ့ သိတတ်မှုတွေကြောင့် မိသားစုအားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ရပုံကို ပြသလာခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်…
အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်အရင်းဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင်ေ မာင်ဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် မောင်နဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူ မိန်းကလေး သရုပ်ဆောင် ရီရီပွင့်ဖြူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲလေးအဖြစ် ထင်ရှားနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်က ချစ်သူသက်တမ်း (၇)နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်မိဘတွေ သဘောတူကြည်ဖြူစွာနဲ့ လက်တွဲနေကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ရီရီပွင့်ဖြူကလည်း မောင့်ကိုချစ်သလို မောင့်ရဲ့ မိသားစုကိုပါ ချစ်ပေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးခြင်းခံ ရသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ နန္ဒာလှိုင်က မတော်ရသေးတဲ့ ယောင်းမလောင်းလေး ရီရီပွင့်ဖြူရဲ့ မေတ္တာေ တွကြောင့် မိသားစုတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပုံကို “Happy birthday ရီရီ!
ဆန္ဒနဲ့ဘဝ တထပ်ထဲကျပါစေ ရီရီ့မွေးနေ့အတွက်ကျွေးတာတဲ့ စိန်စိန်နဲ့ရီရီကင်ထားတဲ့ကျောက်ပုဇွန်ကင် Thank you” ဆိုပြီး မွေးနေ့အတွက် တစ်အိမ်လုံးစားဖို့ ကျောက်ပုစွန်ကြီးတွေပို့ပေးတဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောလာပါတယ်။
ရီရီပွင့်ဖြူကတော့ မောင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို သူမရဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာလို ဂရုစိုက်သလို မောင်ကလည်း ရီရီပွင့်ဖြူတို့ မိသားစုအပေါ် ဂရုတစိုက်ရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးနေ့ရှင်လေး ရီရီပွင့်ဖြူလည်း မွေးနေ့မှသည် အခုလိုပဲ ချစ်ရသူနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အကယ္ဒမီ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ ေမာင္အရင္းျဖစ္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္ေ မာင္ဟာ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အလွမ္းေဝးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ေမာင္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူ မိန္းကေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ ရီရီပြင့္ျဖဴတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြၾကားထဲမွာေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ စုံတြဲေလးအျဖစ္ ထင္ရွားေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္နဲ႔ ရီရီပြင့္ျဖဴတို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္က ခ်စ္သူသက္တမ္း (၇)ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္မိဘေတြ သေဘာတူၾကည္ျဖဴစြာနဲ႔ လက္တြဲေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ရီရီပြင့္ျဖဴကလည္း ေမာင့္ကိုခ်စ္သလို ေမာင့္ရဲ႕ မိသားစုကိုပါ ခ်စ္ေပတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးျခင္းခံ ရသူေလး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာေတာ့ နႏၵာလႈိင္က မေတာ္ရေသးတဲ့ ေယာင္းမေလာင္းေလး ရီရီပြင့္ျဖဴရဲ႕ ေမတၱာေ တြေၾကာင့္ မိသားစုေတြအားလုံး ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ရပုံကို “Happy birthday ရီရီ!
ဆႏၵနဲ႔ဘဝ တထပ္ထဲက်ပါေစ ရီရီ႕ေမြးေန႔အတြက္ေကြၽးတာတဲ့ စိန္စိန္နဲ႔ရီရီကင္ထားတဲ့ေက်ာက္ပုဇြန္ကင္ Thank you” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔အတြက္ တစ္အိမ္လုံးစားဖို႔ ေက်ာက္ပုစြန္ႀကီးေတြပို႔ေပးတဲ့ ရီရီပြင့္ျဖဴကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာလာပါတယ္။
ရီရီပြင့္ျဖဴကေတာ့ ေမာင့္ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြကို သူမရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာလို ဂ႐ုစိုက္သလို ေမာင္ကလည္း ရီရီပြင့္ျဖဴတို႔ မိသားစုအေပၚ ဂ႐ုတစိုက္ရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမြးေန႔ရွင္ေလး ရီရီပြင့္ျဖဴလည္း ေမြးေန႔မွသည္ အခုလိုပဲ ခ်စ္ရသူနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ လက္တြဲႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာ မိန်းမဖြစ်သူလေယာဉ်မယ်လေးကိုကြည့်ရင်း ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ နိုင်းဝမ်း….
ကိုရီးယားမှာ သူမနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားမော်ဒယ်လ်မလေးတွေကို မြန်မာစကားသင်ပေးပြီး ပြောခိုင်းနေတဲ့မေမြတ်နိုးရဲ့ဗီဒီယို..